Isihlomelo * Indawo yokupaka * iWiFi * isitulo esinamavili
Isihlomelo sibekwe kakuhle kakuhle, igumbi lokulala eli-2, isitulo esinamavili esikwaziyo ukuzifikelela kwikhaya lethu esinokufikelela ngokuzimeleyo. Ipropathi yethu ingaphandle kwelali yaseKelvedon e-Essex.
Nokuba uza kuphumla ngempelaveki, udibana nabahlobo kunye nosapho, uze kumtshato okanye umbhiyozo wosapho kwindawo okanye ufuna ukuhlala ixesha elide, ulindelwe ngokufudumeleyo nangobuhlobo.
IsiHlomelo simiselwe ikhilomitha ukuhla kwindlela yabucala ukusuka kwiindlela ezinkulu ezijikelezwe kuhambo olunoxolo lwelizwe. Ngena ngocango lwakho lwangaphambili ngqo kwindawo evulekileyo yokuhlala enesofa kunye nezitulo, indawo yokutyela kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elinezixhobo ezidibeneyo.
Igumbi lokulala elikhulu line-ensuite ye-WC kunye nesitya sokuhlambela izandla kunye negumbi lokuhlambela eliphambili elinethayile ngokupheleleyo igumbi elimanzi, ishawari efikelelekayo enezithinteli zezandla.
Siza kusebenzisana neendwendwe zethu kakhulu okanye kancinci njengoko ufuna. Siza kuba sekhaya ngexesha lotyelelo ngalunye ukukunceda ukuba ufuna naziphi na iingcebiso malunga nokuba ungaya phi, wenze ntoni, utye phi, uhambo lwasekhaya kunye nayo nayiphi na enye into onokuyidinga.
Ipakethi eyamkelekileyo yesonka esenziwe ekhaya, ibhotolo, ubisi, iti kunye nekofu ikulindile kodwa usazise ukuba ufuna enye into.
Siza kusebenzisana neendwendwe zethu kakhulu okanye kancinci njengoko ufuna. Siza kuba sekhaya ngexesha lotyelelo ngalunye ukukunceda ukuba ufuna naziphi na iingcebiso malunga noku…